Ungakwazi ukuthi uyikholelwe noma sokungabaza kwesayensi, njengabo ukubhula ngezinkanyezi, kodwa ngisho nabaphikisi ebuhlungu zonke izinhlobo izinkanyezi bayamangala lapho bethola ukuthi amaqiniso athile kusukela umhlahlo ezinkanyezi sisondela ngokungenakuvinjelwa aqala nini ukugcwaliseka. Agasti 29 - uphawu zezinkanyezi, ebhekisela umlaza Virgo, futhi abantu abazalwa ngalolu suku, wathatha ukuba ubuntu bakhe futhi kudabukisa umnikazi yasebusika melancholy melancholic, futhi Thrift okhathalelayo, ekuvuneni, eqoqwe okhuthele emva ngamaholidi. Obujulayo Virgin eziyinkimbinkimbi futhi eziphikisanayo, kodwa ngesikhathi esifanayo bathambekele uzinze futhi ezimisiwe, ubudlelwane esitebeleni.
Abantu abaseduze kwabo nomuzwa wokuthi Luhambo ukufihla engazalwa 29 Agasti. Yikuphi uphawu Zodiac usengaba nomusa njalo, avulekile futhi yemvelo, njengoba Virgin? Abantu abanjalo ambalwa, futhi uma kunjalo Virgin alinge ukuthatha izifungo nge bakhe abakhethiweyo (-tsey), akukho kungabaza ukuthi ukuzinikezela kwabo abathandekayo, isineke reflection on izenzakalo zesikhathi esizayo ngibenze ngithuthuke lenzelwa kunokujabula emndenini. Ungqimba ingqikithi abantu baqhubeka kancane bazilahle labo abafuna, nakuba kahle kulula ukuya ku Oxhumene naye. Virgin njalo ucabangisise ngokusebenzisa amazwi abo futhi ungathandi lapho othile kufanele ahlanze nelineni angcolile yomphakathi futhi nixoxe abangane babo abaseduze. Umndeni we Virgin - lingcwele.
Kubukeka Virgo (Aug 29)
Isibonakaliso the Zodiac Virgo unika abantu abazalelwa lwezinsuku zokugcina zaleli lokugcina inyanga ehlobo, evamile isilinganiso ukuphakama futhi imisipha ukukhuthazela. Okubonakala mncane kuphela efika kuqala kugxilisa umqondo wokuthi zingabantu ithambile futhi hilenkie ngokwabo Virgin kunzima kakhulu kunalokho ibukeka obuka ngaphandle. Ngezinye izikhathi kungaba ngempela inobudlabha, kodwa hhayi isikhathi eside. Ambient njalo kubonakala begqoke nge ukunambitheka, Dev kucocekile.
Impilo yabantu abazalwa ngaphansi uphawu Virgo
Ababona engekho ucabanga ngemizwa enamandla futhi ulusizi ngokomzwelo, kodwa abalisebenzisa ngobuciko ulifihle ngemuva azenze umuntu equanimity, ukuzola futhi sithola umoya opholile. Kodwa njengoba wazi, imizwa engasetshenzisiwe ezimbi kwezempilo jikelele, futhi lesi sibonakaliso zezinkanyezi, manje noma ngokuhamba kwesikhathi kufanele ubhekane yezifo wokugaya ukudla bese ezinye izitho zangaphakathi. Sagcina futhi baqala "lungasebenzi", nakuba Virgin, kuze kufike ukuchayeka kwabo, njalo wokuvimba ngokwabo kusukela izenzo kabi kubhekwe, okuyiwona (futhi bayazi) kuyodingeka ukuthi bakhokhe.
Uma Virgin ukukhombisa ngobuqotho ngothile ukunakekelwa, akungabazeki ukuthi izithembiso zakhe qiniseka okwakheka. Kodwa kulezo zimo, lapho abantu abazalwa Agasti 29, uphawu zezinkanyezi okuyinto - Virgo, umatasa kakhulu, noma basuke, okuyinto ayifuna ngabomvu entula isikhathi esikhululekile, bangakwazi bathi bazizwa kahle futhi ngaso sonke ngeke uhambe (into ungalilahli ikakhulukazi ezivikela). Ziyakwazi ezinhle kakhulu ukuqaphela amaphutha abanye abantu, futhi ngeke ahluleke ukusho lokhu ngethemba lokuthi ngokushesha iqalisa indlela yokuyala. Kodwa ukubikezela umphumela nethonya zokuziphatha ezifana ilula: abantu kuwo kukhona kabi futhi ushiye eceleni. Mhlawumbe Virgos akufanele ube esibucayi kanjalo, kodwa izimfuno ethile abayifaka kwabanye, benza ngokuqinile ukugcina ngokwabo.
Kusukela ekupheleni eyishumi yokuqala, abantu abazalwa ngaphansi lokhu noma lokhuya iKhima, ekubeni izici kunazo yesiteleka ukubanika izinkanyezi, lokhu kungacacisa ukuthi lalotshwa Virgos ozalwa ngo-August 29. indoda Zodiac noma ngowesifazane, izelwe phansi uphawu Virgo, ungathathi sina, kanye nezibikezelo zesayensi yokufundwa kwezinkanyezi, kodwa enhliziyweni namanje ngokuhlonipha elibhekisela kuso sonke ezingaqondakali futhi ngaphambi kokuphela kubantu abangabazi. Ngakho-ke, ukulalela ososayensi, bavame ukuhamba eceleni isimo sokugxeka yakho futhi criticality ngokweqile, ngokungazelelwe ke thola ukuthi esikuzuzile e eziphakeme ezingalindelekile nokubonwa. Lapho befuna ukukhuluma iqiniso ngendlela ebhuqayo esidlangalaleni, bona bathule kuphinde kwenzeke, futhi abantu bayoba kubo salokho ngokungenamkhawulo sibonge. Uma abantu abazalwa Agasti 29 (Zodiac uphawu - Virgo), uzosebenzisana imibhalo ezigciniwe, zingabantu akekho ukuthola yonke imininingwane kancane, futhi sibonga ukucabanga kohlaziyo uzokwenza esiphethweni esifanele.
Dev kwedivayisi nezinye izimpawu
Musa ukubekezelela luhlata kanye nezitatimende oyisiphukuphuku - lokhu akunakubangelwa abantu engazalwa 29 Agasti. Zodiac kwedivayisi uphawu nezinye izibonakaliso futhi edidayo, njengoba ubuntu babo. Virgin njalo ukhethe umlingani esizayo ngokucophelela isikhathi eside, alingcunule kuzo zonke izinhlobo Luhlolokulinganisa lwetivivinyo neluhlolo. Bakhumbula kahle wonke amaphutha amancane, zindla, ahlaziye ukuziphatha uzakwethu, kwaze kwathi ekugcineni ngeke ixazululwe inyunyana.
Virgo futhi Aries kayikuza ukuvumelana njengoba ukungagunci of Aries odlulela kuye ezitebhisini, wabe ezindla izenzo. Virgin ngeke ukukala kasikhombisa, circumambulate, bheka, balazise futhi ke uqale umsebenzi. Lesi iseluleko esihle Virgin Aries ukuthatha ukunakekela kuphela uma zonke izinto kuyesabeka okwenzekile.
Virgo futhi Taurus ngeke asondele nomunye ngoba Taurus sintula ukungaguquguquki kanye equanimity the Virgin, futhi Virgin efunda kulokho okusuke Taurus ukuba abanothando futhi izinkanuko. Ngokubambisana izuzwe phezulu kakhulu ekuphileni.
Virgo kanye Gemini abe ububanzi, isebenziseka ngezindlela eziningi, ukukhalipha ezijulile futhi savvy. Kodwa lapho Gemini igijimele adventure omusha, uhlale nesithukuthezi, Virgo olandelanayo. Beka konke futhi lokho? Virgin sayiqonda.
Virgo Nomdlavuza okungenasiphelo uzokwenza amazwana komunye nomunye, kodwa Cancer mnene ngeke azinikela Virgin nothando, futhi Virgo bayakwazisa ubuqotho bakhe baziswa.
Virgo noLeo ngeke baqonde nomunye ngoba Leo onegunya angalindela izinkondlo wokudumisa izici ezinhle owenza, Virgo kungagcini amagama ambalwa futhi wenze amazwi ukuze Lev, babemhlambalaza ngoba kuyize yakhe.
Virgo futhi Virgo kutawukwenta bantfu labashadile obunobunye ngoba kuningi abafana ngakho. Into eyodwa ukwenza - ukuba uzihlukanisa kuqondwe ukugxeka.
Virgo futhi Libra zihluke kakhulu, ngoba izikali ungaphuthelwa holidi uyobeka ngubo langa kakhulu futhi uyokhanya, kuyilapho Virgo Libra ukugxekana ka levity.
Virgo futhi Scorpio thola ikhubalo ekhethekile ebuhlotsheni babo ngoba ukuba nezeluleko ezinhle kanye nesifiso experiment kuyoba nesandla bushelelezi ukuphila Dev imizwelo kanye nogqozi, okuyinto sinikezwe Scorpio. Lapho Virgo Scorpio uphatheke kabi ukugxekwa, walimaza Udosi wakhe ukuluma yabo nokwaneliswa. Virgo linqotshiwe, futhi ingxabano ngeke ixazululwe.
Virgo futhi Sagittarius kuyaye kamuva uqale imali sathanda ukushayisana, ngoba Sagittarius uzobe ngifuna nakho ezintsha, kanti ekhaya kuphela ukucasula Virgin uhlala. Uyoze uzame ukukhuluma abanye umuzwa ku Archer, kodwa nje uyamamatheka uya maqondana entathakusa.
Virgo ne-Capricorn ngeke ngokushesha aqaphele nomunye: isifiso sokuvelela futhi inkani Capricorn kuzokwenziwa isipele nge iseluleko esiwusizo futhi umsebenzi onzima owenziwa Virgin. Balindele ekusasa eliqhakazile.
Virgo futhi Aquarius ngeke singathola esivumelana ngakho: siyasebenza kakhulu Virgo, futhi izithakazelo zayo tibheke izidingo umndeni, kuyilapho Aquarius Bayokhuluma ikusasa eliqhakazile sonke isintu, futhi uzokwenza nezipho ezivela inhliziyo, umndeni wakho nje kuphela, kodwa bonke abangane bami.
Virgo futhi Pisces baqonde nomunye, kodwa kuze kufike leso sikhathi kuphela njengoba izinhlanzi akubi elingalodwa amaphupho akho bese uqala ukwenza izinto lungekho ngaphansi isizathu esisangulukisayo amakhaza the Virgin. Kodwa lwenhlanzi luvame ukutshuza namazinyane ngokumelene tide.
Umdlavuza Dragon (owesilisa): kwebalingisi kanye siqu izici
Churkin uVitaliy Ivanovich: Biography Nomkhaya
I-Holcon, iyini? Ukwakhiwa kwalo nesicelo
Kungani i-Google Chrome